AKWpectKWỌ AKW SKWỌ - ASO - BSO - TSO - Nkụzi Oge-Oge - Abụọ - Antwerp - Gaa! ECTlọ akwụkwọ SPECTROOM
Tụgharịa asụsụ weebụsaịtị Spectrumschool ka ọ bụrụ asụsụ ọzọ
Nchịkọta nke usoro ọmụmụ anyị niile.
Ihe ọmụmụ / klaasị ndị a edeela akwụkwọ
Ezigbo onye obia,
Maka afọ ụlọ akwụkwọ 2021-2022, klas / ọmụmụ ndị na-esonụ abanyela akwụkwọ zuru ezu.
Na ụlọ akwụkwọ sekọndrị oge niile
1A na 1B na kampos Deurne
3 ° afọ ọrụ gbasara ọkụ ọkụ ụgbọ ala
3 ° afọ ọrụ gbakwasara ahịa ọkụ eletrik
3 ° afọ ọrụ gbakwasara ahịa ọrụ
3 ° afọ ahia gbakwasara osisi
Nlekọta ikpeazụ nlekọta ọrụ ahịa afọ 3
4 Celsius afọ BSO ọkụ eletrik
4 Celsius afọ BSO mechanics
5 Celsius afọ egwuregwu TSO
5 Celsius afọ BSO arụ ọrụ ngwaọrụ igwe
6 Celsius afọ BSO ọkụ eletrik
7 Celsius afọ BSO ụgbọ ala
N'ime agụmakwụkwọ oge ụfọdụ enwere ndepụta echere maka usoro agụmakwụkwọ ndị a:
nnukwu ọnụ ụlọ
Nchịkwa nchịkwa / PC technician / nkuzi Wood dịkwa nke ọma.
Can nwere ike ịlaghachi na Spectrum School site na Mọnde 23 Ọgọst.
Kpọọ 03 325 08 00 maka ama ndị ọzọ.
EGO diri! ECTlọ akwụkwọ
Anyị na-enye ihe karịrị 50 ọkachamara na ọrụ nka na ụzụ n'ime Mmepụta, STEM, Egwuregwu, Nlekọta, Ọbịa & Ngwa.
Ihe 4 anyị:
Nchọpụta Learning +
Agụmakwụkwọ nke abụọ nke sekọndrị
A-iyi & B-iyi
Learning + maara oru
Oge niile ụlọ akwụkwọ sekọndrị
Ọgwụgwụ ahịa ọrụ (onye bu BSO)
Mmụta + Na-aga n'ihu
Ọganihu & Njedebe abụọ (mbụ ASO / TSO)
Ịmụta + Na-arụ ọrụ
Oge agụmakwụkwọ oge ụfọdụ
Ọgwụgwụ ahịa ọrụ (mbụ DBSO)
Ọkwa mbụ + OKAN
A & B eruba
Na ogo nke 1 anyị ị chọpụtala talent gị. Wayzọ a ị na - eme ezigbo nhọrọ maka ọmụmụ ihe maka ogo nke abụọ.
2nd & 3rd ogo
Je mee ka ị bụrụ ọrụ gị ma gị na-amata de ọrụ ahịa. Entlọ ọrụ a maara arụ ọrụ ahịa njedebe (nke bu BSO). Anyị na-ahazi ụfọdụ ọmụmụ na mmụta abụọ yana yana agụmakwụkwọ oge gboo oge niile.
Tọọ ntọala siri ike etinyere ma akwadebe gị maka ọmụmụ ihe dị elu. Entlọ ọrụ a maara eruba na njedebe abuo (mbụ ASO & TSO).
(site na afọ 15)
Jikọtara mmụta na ọrụ na ị siri ike n’ahịa ọrụ. Entlọ ọrụ a maara arụ ọrụ ahịa njedebe (mbụ DBSO).
Chọta akwụkwọ gị ebe a!
Nhazi anyi zuru ezu
Chọpụta ụkpụrụ mbụ anyị!
GỊNỊ Mere O Ji Bịa! Ụlọ akwụkwọ?
ARM +TA + bụ ịmụ ihe karịa ịmụ ihe:
Tụlee n'enweghị ihe ọ bụla
Na nkuzi anyi na ahia ahia (onye bu BSO) ị gaghị enweta ihe, ma ị ga-enweta “green bọọlụ”, jikọrọ mmụta ebumnuche kwa isiokwu. Nweta akara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe ị gachara ebumnuche iji mezuo. A na-elekwasị anya na iru ihe mgbaru ọsọ mmụta nke ụmụ akwụkwọ ọ bụla ọ bụghị na nkezi klas.
Nwee akara ogo mbụ
Na ogo nke mbụ anyị, ị ga-achọpụta ikike gị wee họrọ ezigbo ọmụmụ ihe. Gbanye campus Plantin ị nwere ike ịnụ ụtọ ubi dị iche iche ma chọpụta nka gị. Na ogige Ruggeveld, ịhọrọ ngalaba (STEM ma ọ bụ SPORT) wee chọpụta talent gị na ngalaba a.
> Ịmatakwu banyere Ịmụta + Ịchọpụta
Jikọtara ụwa 2 kacha mma: ịmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ na ịmụ ọrụ n'ebe ọrụ. Nweta ọtụtụ ahụmịhe na ezigbo ọrụ ọrụ. Wayzọ a ị na-ejikwa ngwaọrụ na teknụzụ kachasị ọhụrụ eme ihe ma ị nwekwuo ohere na ọrụ ọrụ. Na ọzụzụ anyị Ịmụ ihe abụọ, anyị kwadoro Ịmụta + arụ ọrụ (nkuzi oge-oge), internships na mmuta n’ebe oru, “imu ihe n’ ulo oru ”bu ebe ndi mmadu no.
Nduzi maka ahia oru
Ndị nkuzi anyị na ndị ọrụ anyị nwere ahụmahụ ọtụtụ afọ na-eduzi ụmụ akwụkwọ anyị na ụlọ ọrụ ahụ. N'ime ngalaba mmụta ọ bụla anyị nwere ọtụtụ netwọk nke ụlọ ọrụ. Nke a bụ otú anyị si eduga gị n'ebe kwesịrị ekwesị na ahịa ọrụ.
Omenala bụ otu n'ime ihe omume anyị niile. Anyị nwere ọtụtụ nnukwu na obere omenala oru ngo. Ịchọrọ ịnọgide na ihe okike na-agụnye akwụkwọ gị? Mgbe ahụ i nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị!
Ihe omume ehihie
N'ehihie, ị nwere ike isonye n'ọtụtụ ihe. Nhọrọ sitere na onyinye: egwuregwu, ụlọ ọgwụ drum, yoga, football, basketball, chess club, nzuzo, ...
Gbanyụọ nlekọta isi
Onye ọ bụla kwesiri inwe mmetụta n'ụlọ ya n'ụlọ akwụkwọ anyị. Ndị otu anyị na-ahụ maka nlekọta na-elekọta, ndị ndụmọdụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na-esochi dị njikere mgbe niile na ajụjụ gbasara ọdịmma n'ụlọ akwụkwọ, ọrụ ọmụmụ, ọnọdụ ụlọ, iji ike emegbu mmadụ, nsogbu mmekọrịta ọha na eze, wdg.
Aha ụlọ akwụkwọ ndebanye aha 2021 - 2022
UDM STAKA N’ ELỌ EGO NA-EKWUR M EBURU ỌR F N’ INB VR V VIRTUAL LAB
Ozi ndị ọzọ>
Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ gbasara mmụta abụọ
“Gbanụ! N'ụlọ akwụkwọ dị iche iche m nwetara nduzi n'otu n'otu. A rụsiri ọrụ ike m ike ka m wee nwee ihe ịga nke ọma ma gụchaa. N'ihi ntọala siri ike nke enyere m, enweghị m nsogbu na mahadum nke etinyere sayensị. Dị ka onye nkuzi PE, ana m etinyekwa nke a maka ụmụ akwụkwọ m taa. ”
Tom, nwa akwụkwọ, onye nkuzi LO
“Mgbe m gụsịrị akwụkwọ na GO! Enwere m ụlọ akwụkwọ ọta akara m ọkachamara n'ụlọ akwụkwọ na akpaaka. Ruo oge ụfọdụ, arụrụ m ọrụ dị ka injinia robot. Ugbu a, m na-arụ ọrụ dị ka njikwa njikwa injinia. M na-eme ihe omume PLC ma mejuputa nrụnye. The nkà m nwere na-aga! A ka kụziiri m Schoollọ Akwụkwọ Spectrum n'ọrụ m kwa ụbọchị. ”
Younes, onye bụbu nwa akwụkwọ, ugbu a bụ onye injinia na Canada
“Na mgbakwunye na nkuzi, anyị ga-sọfụ na France, dịka ọmụmaatụ. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. N'ụzọ ahụ, m na-enweta ọtụtụ ahụmahụ. ”
“Anyị na-arụ ọrụ na ndabere ọrụ site na mmalite ruo n'ọgwụgwụ; jiri aka anyị na iji teknụzụ na-achịkwa kọmputa. Obi na-adị m ezigbo ụtọ ma i jikọta onwe gị ma hụ na ọ na-arụ ọrụ. ”
Debanye maka 1A na 1B
UGBU OZI NA OZI
Ụlọ akwụkwọ ndebanye aha 2021 - 2022
Ụlọ akwụkwọ ndebanye aha 2019 - 2020
Egwuregwu Grand Prix - Powertool Dragracing: mbipụta nke abụọ!
OPEN CAMPUS RUGVELD EGO 2019
Ụlọ akwụkwọ ndebanye aha 2020 - 2021
VOKA EGO! IGBOKWU SIRIAN EUROPEAN VOTE LABEL
ỌTTT AT MAKA MAKA MAKA ANBỌREST NIILE MGBE LOCKDOWN
Ndị na-eme egwuregwu n'egwuregwu na-akwado mbido gburugburu 3X3 MASTERS
Umụaka na-egwu egwuregwu nke aka ha!
TRIALOG: Gaa! Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkà mmụta sayensị na-amalite ngwa maka Ịmụ Ọmụmụ
Klaasị nke ụlọ
Enyo nke Stiel
VOTE na kampos
obere pixel ule
Mụta + Chọpụta nwa oge
Debanye aha maka Learningmụta + Na-aga n'ihu
Nlekọta nke usoro ọmụmụ niile na Spectrumschool
ọmụmụ ụbọchị scoreless nnyocha usoro
Mụta + Nru nwa oge
Daalụ maka nrubeisi gị!
NTỤKWU NDỊ PRICE
Ihe mgbagwoju anya
Oflọ nke Ọdịnihu
Mụta + Na-arụ ọrụ-nwa oge
Ndebanye aha nke nzipu ozi
Kedu ihe mmụta abụọ?
Ngwá Ọrụ Nlereanya!
Mụta + Discover
Debanye aha maka Ịmụta + Ịchọpụta
Ịmụta + arụ ọrụ
Debanye aha maka Ịmụ Ihe + Na-arụ ọrụ
Ọmụmụ Ihe +
Debanye aha maka Ọmụmụ Ihe
Ntinye nrụnye Dual
(Enyemaka) esi nri
Onye na - edozi ya
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ahụ Ike Nlekọta
ARELỌ NA Nlekọta Ndị Agadi
Onye na-ahụ maka PC
Children eso Dual
Mmezi Mechanic Auto Dual
Egwuregwu Egwuregwu Emeputa
BASIC Nhọrọ egwuregwu (A)
1e Degree ụda
Ngalaba ogo 1e
Mmegharị & Egwuregwu
Dezie ogo 1e
Bọọdụ mebere ụgbọ ala
AKW OPKWỌ AKW VKWỌ VODE VOTE
NKỌRASRAS NKỌR OF nke ỌH &R & & ỌD &
OGWU EGO NA-EKWU EGO
EGO B O EGO (B)
(Enyemaka) Onye ọrụ
Eletriki injinịa & Ọdụdọ echichi technology
Ngwongwo ihe eji eme ihe (ngwa igwe)
Computer-achịkwa igwe ngwaọrụ
Onye na-arụ ọrụ mmepụta ọla - CNC
Car - AKỌ
Egwuregwu Nchekwa onwe
Ihe arụ ọrụ
Injin Injinia Egwuregwu Industrial
Onye na-emepụta eletrik abụọ
Oha na odimma
Ntuchi - nchichi - ọrụ
AKTIONKỌ AKW VKWỌ AKW OPKWỌ VODES
Central kpo oku
Nlekọta na ọdịmma
Ị na-arụ ọrụ n'ụdị ejiji